MTZ 320: SIFOOYINKA IYO QALABKA FARSAMADA - MISHIINADA GAARKA AH
Maanta, taraafikadu waa mid baahsan, iyada oo aan loo eegin xajmiga ama isticmaalka dalal kala duwan. Mid ka mid ah wakiillada caanka ah waa MTZ 320 traktor, taas oo loola jeedo nooca mashiinnada mashiinnada mashiinka dhejiska.
MTZ 320: sharaxaad gaaban
"Belarus" waxay leedahay naqshad jilicsan oo 4x4 ah waxaana lagu daraa fasalka gaaban 0.6. Waxaa lagu daraa qalab kala duwan, iyo sidoo kale mashiinada. At MTZ 320 wuxuu sameyn karaa tiro badan oo shaqooyin kala duwan ah. Mitirafoorka ma aha mid ka baqaya deyrka, waa mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada leh. Farqiga kale waa naqshad quruxsan oo dhamaystiraysa noocyada nooca MTZ. Suuqa, xayawaankan waxaa loo yaqaanaa waqti dheer kahor intaan dadka kale, laakiin horeba wuxuu u suuro galiyay inuu helo kalsooni iyo sumcad wanaagsan. Sababtoo ah fududeynta iyo kalsooni isku mid ah ee tusaaluhu waa mid caan ah oo ka mid ah soo jeedinta kale ee warshadda.
Ma taqaanaa? Tikidhada ugu horeysa ee tijaabada ah MTZ ayaa iftiimisay 1949. Wax soo saarku wuxuu bilaabmay kaliya 1953.
Qalabka waxqabadka yar yar
Gawaarida yaryar ee "Belarus 320" waxaa loo sameeyey sida caadiga ah. Baabuurtu waa gadaal, dhabarka waxaa la dhigaa meel fog. Si kastaba ha ahaatee, qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka ayaa weli u qalma tixgelin taxaddar leh.
Baro MT3-892, MT3-1221, Kirovets K-700, Kirovets K-9000, T-170, MT3-80, Tareenada Vladimirets T-25, oo loo isticmaali karo noocyo kala duwan oo shaqo ah.
Qalabka MTZ 320 wuxuu ka kooban yahay qaybaha soo socda:
Cabin Qalab casri ah, oo loo hoggaansamey dhammaan heerarka amniga ee khuseeya, waxay u oggolaaneysaa inuu hawlwadeenku abuuro xaalado ku habboon Qolka waxaa lagu qalabeeyaa dhalada kuleylka kuleylka leh, qalalaasaha iyo qalabka maqalka, hawo-qaadista iyo xitaa kuleylka. Muraayadda Panoramic waxay bixisaa aragti buuxa oo dhan. Daaqadaha waxay leeyihiin cilad koronto.
Engine Gawaarida yaryar waxaa ku yaala nooca mitrooga 4-stroke nuuca LDW 1503 NR. Waxay soo saartaa 36 hp, oo leh miisaan shaqeyn oo kaliya 7.2 litir. On engine waxaa jira injirta shidaalka ee la isku qurxiyo. Isticmaalka shidaalka ee cabbirka ugu sarreeya 330 g / kWh. Gawaarida shidaalka ayaa buuxin kara 32 litir. Mashiinka ayaa si adag ugu xiran qeybta hore.
Chassis iyo gudbin. Traktor wuxuu leeyahay nidaam farsamo. Gorgortanku wuxuu bixiyaa in ka badan 20 habab oo hawlgal ah: 16 horay iyo xawaare xoogaa gadaal ah. Gawaarida hore ee "Belarus". Faa'iidada waa karti u leh bedelida cabbirka cabbirka. Qodobka hore waxaa lagu qalabeeyaa qalab kala gedisan oo gawaarida lagu xiro iyo habab loogu talagalay dhaqdhaqaaqa xorta ah ee nooca ratchet. Qaybta dambe ee gawaarida waa qasabad adag. Xawaaraha 2aad ee xawaaraha.
Waa muhiim! Sababtoo ah joogitaanka gawaarida qalabka si loo yareeyo istaroogga, MTZ 320 wuxuu qaban karaa shaqooyin u baahan awood awood leh. Xawaaraha dhaqdhaqaaqa wuxuu gaaraa 25 km / h.
Qalabka korontada iyo qalabka korontada. Nidaamka hiddaha wuxuu leeyahay qaab kala duwan. Nidaamka dhejinta ee farsamooyinka iyo unugyada la dhisay ayaa abuuraya tareenka qaadista tareenka 1100 kg. Awoodda waxaa lagu kala qaadaa iyadoo la isticmaalayo laba-xawaare PTO. Qalabka korontada ee mashiinka ayaa u shaqeeya iyada oo loo mahadcelinayo koronto-dhaliyaha, kaas oo hubiya hawlgalka iftiinka gudaha iyo dibeddaba, qaybo korantada iyo qalab kale.
Nidaamka isdabajoogga. Mashiinka waxaa lagu xoojiyaa bamka korontada. Diraacda ayaa lagu hagaajin karaa xaglo iyo xaglo kala duwan, taas oo u sahlaysa darawal kasta. Qalabka wuxuu ka kooban yahay tiir, mashiinka qiyaasta, gaaska hydraulic, mishiinka korontada ku shaqeeya ee ku xiran mishiin iyo qalab xirid.
Tilmaamaha farsamada ee MTZ 320 waa sida soo socota:
Length 3 m 100 cm
Jaantuska 1 m 550 cm
Dhererka cabirka 2 m 190 cm
Weyn 170 cm
Daboolka hore ee gawaarida
taayirrada dambe 126/141 cm
Maaraynta ugu yar yar m
Cadaadiska carrada 320 kPa
Ma taqaanaa? Shaqada Traktor Minsk ayaa la aasaasay bishii May 1946. Maanta, wuxuu ka mid yahay siddeed xarumood oo waaweyn oo adduunka ah, oo aan soo saarin qalabka gawaarida gawaarida leh, laakiin sidoo kale mishiinno kale: motoblocks, trailers, attachments iyo waxyaabo kale oo badan.
MTZ minitraktor sababtoo ah xuduudaheeda iyo lifaaqyo kala duwan ayaa ka dhigaya ku habboon degaan kasta oo ka mid ah dhaqaalaha:
Shaqooyinka beeraha (beerashada ka hor, goosashada, beerashada hadhuudh ama dalagyo dalagyo ah, iyo sidoo kale beeritaanka).
Xoolaha (diyaarinta raashinka, nadiifinta iyo shaqo kale oo adag).
Dhismaha (gaadiidka shixnadaha, qalabka, nadiifinta meelaha dhismaha).
Xoolaha (gaadiidka dhirta, dhulka ama bacriminaha, iyo sidoo kale goynta).
Dhaqaalaha degmada (ka saarista barafka ama gaadiidka alaabta kala duwan).
Qaadashada mishiinka culus.
Intaa waxa dheer, MTZ 320 wuxuu ku habboon yahay isticmaalka meelaha yaryar iyo shaqada oo aan loo baahnayn qalab culus.
Gawaarida Belarus 320 ayaa ku dhawaad ​​caalami ah, laakiin sida mishiinada kale waxay leedahay dhinacyo fiican iyo diidmo.
Ku darida qaabka caadiga ah waa qalab kala duwan oo si fudud loo dhisi karo loona saari lahaa.
Iyadoo loo eegayo xajmigeeda xajmiga ah, cutubka waxaa loo isticmaali karaa dhul kasta.
Kalsooni sarreeya dhammaan qaybaha dhismaha.
Isticmaalka shidaalka yar.
Tilmaame fiican oo awood ah oo kuu ogolaanaya inaad qabato shaqo adag.
Kharash yar oo la xidhiidha dayactirka iyo dayactirka cagaf-qaadaha.
Waa muhiim! Xasilinta Tractor marka la isticmaalayo xirmooyin waaweyn ayaa lagu gaaraa iyadoo lagu rakibayo culeysyo dheeraad ah.
Cilladuhu waa khashinka hannaanka hidda, kaas oo u baahan nadiifin joogto ah.
Mishiin leh qaboojiye dareere ah ayaa aad u adag in la bilaabo heerkulka ka hooseeya eber.
Awoodda korontada ma awoodo inay ka adkaato dhoobada dhulka adag.
Kuma badin kartid gawaarida, maadaama aysan u adkeysan karin gawaarida.
Mashiinka shidaalka ee mugga biyaha aan ku filneyn oo leh isticmaalka shidaalka.
Bateriga wuxuu leeyahay lacag daciif ah.
Sida aad arki karto, tareenada yaryar markasta ma ahan awood awood leh. Haddii aad dooratid habka saxda ah, iyo ugu muhiimsan, ogow waxa ka shaqeeya waxaad u baahan tahay qalabkaas, waxaad ka heli kartaa ikhtiyaar ku habboon lacag aad u macquul ah.